Tonga amin'ny fitateram-bahoaka ny angovo azo havaozina | Fanavaozana maintso
Tonga amin'ny fitateram-bahoaka ny angovo azo havaozina
Daniel Palomino | | Angovo azo havaozina, General, Teknolojia vaovao
Mihamaro hatrany ny zavatra hitantsika fanavaozana angovo azo havaozina toy ny projet super an'ny fiompiana rivotra, ny fiompiana amin'ny masoandro, sns. amin'ny fotoana hitantsika fanavaozana fiara elektrika.
Na izany aza, fiara elektrika fotsiny no tendrony ary noho ny fiara maro karazana ity no ahitantsika ny fivezivezena any amin'ireo tanànantsika Ny olana ananantsika amin'ny famoahana CO2 dia tsy hifarana.
Tsotra izany nanomboka teo tsy vonona hamokatra habetsahan'ny angovo isika ilaina amin'ny fampandehanana ireo fiara ireo nefa tsy mamoaka CO2 ary koa inona ny angovo azo havaozina dia tsy nahomby tamin'ny fitaterana azy ireo toy ny afaka manolo ireo motera fandoroana.
Na dia manamboatra bebe kokoa aza ity farany ary isan'andro dia manakaiky ny dingana lehibe iray isika eo alohan'io.
1 Ny angovo avy amin'ny masoandro dia mihamora ary mahomby kokoa
2 Ireo fiaran-dalamby vaovao
3 Fitaterana an-dàlana
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia mihamora ary mahomby kokoa
Be loatra ka na dia ao amin'ny ny ankamaroan'ny toerana lavitra eto amin'izao tontolo izao dia ny angovo azo havaozina manomboka ho ampy mahomby sy mora vidy raha hampidirina ary mbola tsara kokoa, afaka mahita azy ireo amin'ny fitaterana isika.
Midika izany fa ny Tapiatpia, anarana izay mampisondrotra ny sambon'ny tetikasa iray izay zavatra roa no asany: mampifandray ny Amazon ary afaka manao tsy manimba ny tontolo iainana mandritra ny dingana.
Ity sambo fantatra amin'ny anarana hoe Tapiatpia any amin'ny vohitra teratany eo anelanelan'ny Ekoatera sy Però ity dia a sambo masoandro izay afaka mitety renirano ala 1.800 km mahery ao anatin'ny 25 andro.
Mpanentana an'io tetik'asa io, Oliver Utne dia nilaza tamin'ny New York Times fa "Ny hevitra dia ny fampiasana ireo làlambe razana izay renirano: làlambe vonona ary tsy mikorontana ny ala"
Taorian'ny dimy taona niasana ilay tetikasa, vao avy nanao ny fitsapana fitsapana voalohany nataony i Oliver niaraka tamin'ny hevitra fa afaka mampiray ny ampahany lehibe amin'ny ala ekoatera izany anio Ao anatin'ny toe-javatra mahatsiravina izany.
Na dia marina aza dia mbola misy ireo karazana sambo ireo manana habaka sy pototra tena voafetraSaingy miaraka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana bebe kokoa dia tetikasa mahasarika.
Ireo fiaran-dalamby vaovao
Tsy mandeha lavitra loatra, ny Governemanta ny India dia nanambara herinandro vitsivitsy lasa izay ny fananganana tetikasa "hamaha" ny lamasinina ao amin'ny firenena amin'ny programa izay, amin'ny fomba tombana, dia ho afaka mitsitsia diesel 21.000 XNUMX litatra eo ho eol isaky ny convoy isan-taona.
Raha te hahita ny vaovao feno momba ireo lamasinina mpamaky masoandro ireo ianao dia afaka mahita izany ao amin'ilay lahatsoratra "Ny fiaran-dalamby hybrid miaraka amin'ny panneaux solaires dia manomboka mihodina ao India" izay nosoratan'ny vadiko Tomás Bigordá.
Mazava ho azy fa ny tsy ampoizina dia tsy nisy hatramin'ny fotodrafitrasa lalamby manana antony tsara izy ireo atahorana ny herinao manontolo amin'ny herin'ny masoandro Noho ny fampiasana fatratra izay omena an'io karazana fitaterana io dia mandritra ny andro, ankoatry ny firenena sasany ny isan'ny voafetra be ny lamasinina tsy afaka mampitombo ny isany hatramin'ny taona tambajotra elektrika eo an-toerana dia tsy manome mihoatra ny azy.
Angletera manana an'io olana io dia manomboka tetikasa hamaha azy.
Amin'ity tranga ity, ny Laboratoara ho an'ny angovo Imperial College izay no nanazavan'ny profesora iray antsoina hoe Tim Green fa: "Maro ny làlamby miampita faritra misy herijika lehibe amin'ny angovo avy amin'ny masoandro, nefa tsy afaka miditra amin'ny tambajotra elektrika efa misy."
Ny fampidirana ny famokarana masoandro, ny fametrahana zavamaniry avy amin'ny masoandro akaikin'ny lalamby ary koa ny lalamby dia zavatra izay, araka ny vinavinany, dia hitranga ao anatin'ny 10 taona latsaka izao.
Olana ifotony io ary tato anatin'ny taona vitsivitsy dia betsaka ny voalaza momba izany rehetra izany.
Na izany aza, tsy misy fiara na kamio azo havaozina, ny fanontaniana na ny kofehy miresaka dia mitovy amin'ilay iray eo am-piandohana. Manova ny toerana anaovantsika emissions ve isika fa tsy mampihena azy ireo? Io no votoatin'ny raharaha.
Noho io antony io ihany, tetikasa mitovy amin'ny an'ny lalamby manomboka "mahandro" ao an-tsain'ny maro izy ireo.
Ny tiako holazaina dia ny apetaho eo amin'ny manodidina ny arabe ny panneaux solaires, fanavaozana ireo fotodrafitrasa ka, amin'ny alàlan'ireny lalana ireny ihany, no manome ny angovo ilaina hamenoana ny fiara.
Amin'ny alàlan'ny Scalextric go!
Na dia toa tsy azo atao aza izany ary kely ny hadalan'ny olom-bitsy, ireo tetikasa ireo dia efa mandeha sahady ary ny fanadihadiana voalohany dia manondro fa misy maro mora kokoa noho ny nandrasana.
Ary farany, ary mba hanomezana fahafaham-po ny fahalalanao ny fahalianana dia naneho hevitra aho fa mihabe ny fandrosoana amin'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra na "azo havaozina", fa ny fiara vaventy azo havaozina kosa?
Afaka mamaky vaovao ianao eto an'ny tetikasa EcoTrans izay itondran'ny kamio toy ny hazo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » General » Tonga amin'ny fitateram-bahoaka ny angovo azo havaozina
Ny havaozina dia mamatsy mihoatra ny 80% ny angovo any Nikaragoà
Mahavita miasa mandritra ny herinandro sahady i Portugal amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina